John Cena Oo Ka Hadlay Khatarta Caafimaad Ee Uu Kala Kulmi Karayo Musaaricada Iyo Arrimo Kale – Cadalool.com
John Cena Oo Ka Hadlay Khatarta Caafimaad Ee Uu Kala Kulmi Karayo Musaaricada Iyo Arrimo Kale
Xiddiga ciyaaraha musaarada WWE ee John Cena ayaa shaaciyey inuu kusoo laaban doono garoomada oo uu ka qayb-geli doono ciyaarta legdinta Crown Jewel ee horraanta bisha dambe.
41 jirkan guulaha badan ka gaadhay musaaricada ayaa dhowaan sheegay inuu muddo laba bilood ah ku mashquulsanaan doono filim uu ku metelayo dalka China oo ku khasbay inuu beddelo muuqaalkiisa isaga oo la baxay timaha.
Cena oo qoray buugga Elbow Grease oo soo baxay horraantii bishan ayaa qabsaday suuqa lagu iibiyo buugaagta ee magaalada New York oo uu ka noqday rikoodh jebis, hase yeeshee waxa uu ka farxiyey taageereyaashiisa garoomada dartii u yimaadda oo uu u sheegay inuu ka qayb-geli doono Crown Jewell oo la filayo inuu ka qabsoomo waddanka Sucuudi Carabiya, inkasta oo ay jirto hubanti la’aan ka timid dilka wariyihii u dhashay dalkaas ee lagu khaarajiyey qunsuliyadda Sucuudiga ee Turkiga.
Bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu Cena kaga hadlay laba arrimood oo kala ah buuggiisa Elbow Grease iyo qorshihiisa labaad ee ka qayb-gallka ciyaarta aadka loo sugayo.
Dhinaca kale, waxa uu Cena sheegay in caafimaadkiisa aanay u wanaagsanayn inuu sannadkii ciyaaro 310 jeer tartanka Musaariccada, isla markaana uu beddelayo qorshe nololeedkiisa maadaama ay da’diisu tahay 41 jir, waxaanu yidhi: “Aniga oo 41 jir ah inaan sannadkii ciyaaro 310 jeer uma wanaagsana caafimaadkayga guud ahaan. Waxa aan doonayaa inaan dariiqyada cararo 80 jeer halkii aan ka legdami lahaa. Waxa aan taaganahay xilligii aan ka fikiri lahaa naftayda muddada dheer. Taas macnaheedu maaha inaan ka tegayo WWE, weligayna kama tegayo WWE oo ah gurigayga, laakiin waa inaan ka fikiro caafimaadka muddada dheer.”